MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 853
>Book and Letter from IBMO &amp; ABMA submitted to visiting Sayadaw Gyis from Burma
>ဥဒေၝင်း - ကိုးကယ်ြယုံကည်မအြသစ်
> အသံနားဆင်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၅)တန်ဆောင်မုန်း၊ တန်ဆောင်တိုင်မာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ရှေ့တပတ်က အဇာတသတ်မင်း မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကို သွားမယ့်လမ်းက မှောင်နေလို့ မီးရှူးမီးတိုင် ကိုင်ဆောင် ထွန်းညှိပြီး သွားရလို့ တန်ဆောင်မုန်းလမှာ မီးထွန်းပွဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ မြတ်စွာဘုရားက အဇာတသတ်မင်းကို ‘သာမညဖလသုတ္တန်’ကို ဟောကြားခဲ့လို့ ‘သာမညဖလအခါတော်နေ့’လို့ ခေါ်ကြတယ်၊ အဲဒါ ‘ရဟန်းပြုခြင်းရဲ့အကျိုး’ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းပြုလို့ ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးတွေကတော့ – – ရဟန်းပြုပြီ ဆိုတာနဲ့ မင်းခစားဘ၀နဲ့...
> အစိုးရဆန့်ကျင်သူများ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကို ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈သံတုတ်ကိုင်ပြီး လုံခြုံရေးယူထားသည့် ဆန္ဒပြသူအချို့။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူများက လေဆိပ်ကြီး၂ခုကို သိမ်းပိုက် ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အနီးသို့ရောက်လာသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အား ဆန္ဒပြသူများက မောင်းထုတ်လိုက်သည်။ ရဲတို့၏ ဒိုင်းကာများကို လုယူ သိမ်းဆည်းလိုက်ကြသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ ဘုရားဖူးသွားမည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချို့ ၀တ်ပြုနေစဉ်။ ခရီးသည်အများအပြား လေဆိပ်တွင် ပိတ်မိနေကြသည်။ လေဆိပ်တွင် အခမဲ့ ဆံပင်ညှပ်ပေးနေသော ဆန္ဒပြသူ။ လေဆိပ်သို့ချည်းကပ်ရာလမ်းမကြီးကိုလည်း အထက်ပါအတိုင်း ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဆန္ဒပြသူများ ထိန်းချုပ်ထားရာ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝင်းအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုတခု ယနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၃၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတဦးကို ကိုးကားပြီး အေပီသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ (photos: AP, Reuters) No tags...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၁၈) အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ‘ရန်သူဆန့်ကျင်ခံရခြင်းဟာ ကိစ္စဆိုးမဟုတ် ကိစ္စကောင်းဖြစ်တယ်’ ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်ရဲ့ နံနက်ခင်းတခုမှာ ကျနော်၊ ကျနော်နဲ့အတူ အဖမ်းခံနေရတဲ့ NLD လူငယ်တွေကို အားပေးစကား ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း အနောက်ခြမ်း စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် မပြီးဆုံးသေးခင်မှာပဲ ကျနော်တို့ အဖမ်းခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ငပုတော၊ ပြင်ခရိုင်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်း၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ကို ဖမ်းပြီး နောက်တရက်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဘွင့်၊ ဗိုလ်ကြီးကျော်ရှိန်းနဲ့ ဗိုလ်ကြီးထွန်းတင်တို့ကို စစ်တပ်က ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပင်လယ်ပြင်ကနေ ပုသိမ်ကိုပြန်ရောက်လာရင် NLD တိုင်းရုံးမှာ ကြိုမယ့် ဆိုမယ့်သူ မရှိတော့လို့ပါပဲ တဲ့။ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဘွင့်ဆိုတာက အရင် မဆလခေတ်တုန်းက ဧရာဝတီတိုင်း...
> ဘုံဘေတိုက်ပွဲပြီးဆုံးဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း သေဆုံးသွားသူ ဘုံဘေမြို့ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ဈာပန။ဗုံးခွဲပစ်ခတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံများဖမ်းဆီးထားခြင်း စသည့် လုပ်ရပ်များကို လက်နက်ကိုင် လူငယ် ၁၀ ဦးက လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့နှင့် ၃ ရက်ကြာ ၃ ရက်ကြာတိုက်ခိုက်မှု အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အေပီသတင်းဌာနက ဆိုသည်။ သေဆုံးသူပေါင်း ၁၉၅ ဦးရှိသည်ဟု သိရသည်။ တာ့ခ်ျမဟာဟိုတယ်အတွင်းပိုင်း မြင်ကွင်းတခု ခါးပတ်ခေါင်းက သူ၏အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြနေသော ဆေးရုံပေါ်ရောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး။ အော်တိုလက်မှတ်ထိုးနေသော ကွန်မန်ဒိုတပ်သားတဦး။ ကွန်မန်ဒိုတပ်သားများကို နှုတ်ဆက်နေသော ဘုံဘေလူထု။ (photos: AP, Reuters) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဘီလီရဲ့အိမ်ကလေး စိုးသင့်ဆွေ နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဘီလီ တယောက် ပရမ်းပတာ လှုပ်ခါရမ်းနေတဲ့ အလုံပိတ်ကုန်တင်ကား အသေးလေးရဲ့ နောက်ခန်းမှာ ငိုက်မြည်းရင်း လိုက်ပါလာတယ်။ ကားကို မောင်းနေတာက သူ့ရဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှုး စမစ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးက မိုးပျံတိုက်တွေရဲ့ မှန်ပြူတင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေ။ စမစ်ကတော့ လုပ်သက် ၁၀နှစ်ထက် မနည်းရှိပြီ။ ဘီလီကတော့ အလုပ်ဝင်တာ တပတ်ပဲရှိသေးတယ်။ ( အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။ ) No tags for this post. Related posts No related posts.
> အထွေထွေ အကြပ်အတည်းကြောင့် ရန်ကုန်အလုပ်သမားများ အလုပ်လျော့ချခံရ၊ တောင်းရမ်းစားသူများ တိုးလာဟု ဆို ညွန့်ထွေး နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ နိုင်ငံတကာမှာ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ရန်ကုန်မှာလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ တိုးလာပါတယ်။ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး ခွက်လက်စွဲပြီး တောင်းစားနေရသူတွေလည်း တိုးလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်များမှာ လှိုင်သာယာအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေက လုပ်သားတွေ လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ အထည်ချုပ် အလုပ်သမ တဦးက ပြန်ပြောပြပုံက – “ လွန်ခဲ့တပတ် ညနေအလုပ်ဆင်းချိန်မှာတင်ပဲ မန်နေဂျာက နက်ဖြန်ကစပြီး အလုပ်မဆင်းနဲ့တော့လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကျမတို့ ၁၆ ယောက်ကို ရွေးပြောလိုက်တယ်။ လျော်ကြေးလည်း မပေးဘူး။ ဒီတော့လည်း ကျမတို့ အိမ်ပြန်ရတာပေါ့” အစိုးပညာရေးစနစ် ချွတ်ချုံကျနေပြီးနောက် ကျန်းမာရေး စနစ်များ၊ လူမှုရေး...
> အဆိပ်အတောက် ရွှေတြိဂံ ရှင်းတမ်း တရုတ် စာနယ်ဇင်းသမားများ ရေးသည်။ ဖြူစင် ဘာသာပြန်သည်။ အခန်းဆက် ဘာသာပြန် မှတ်တမ်း – ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အပိုင်း (၃) ထမြောက်အောင်မြင်မှု သရဖူဆောင်း ရွှေတြိဂံကူမင်တန် အကြွင်းအကျန် ဘိန်းရာဇာများ ကူမင်တန်အကြွင်းအကျန် လီမိတပ်နဲ့အတူ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ရွှေတြိဂံဘက်ဆီ ဆုတ်ခွာ သွားကြတယ်။ နယ်မြေရပ်ခြား တရပ်တကျေးမှာ အထီးကျန်ဘဝ စစ်တပ်အဖြစ် ‘နိုင်ငံအထဲက နိုင်ငံ’ အသွင်သဏ္ဍာန်ဖြင့် စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရပါတယ်။ ဒီတပ်ပျက်အင်အားစုကြီး ရွှေတြိဂံဆီ အတင်း ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်လာကြပြီး မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ လူနေမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကို အတင်းပဲ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘိန်းအဆိပ်ငွေ့ဖြင့် တပ်ရဲ့အသက်သွေးကြောကို ထောက်ပံ့ရှင်သန်စေခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့...
> မိုးခေါင်တောက စစ်မောင်းသံကြည်အောင်နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ နွေဦးတစ်ထောင်၊ သံပူရောင်နဲ့မိုးခေါင်တောဆီ တပ်ကြီးချီ။ ဒဟပ်နဲ့ငု၊ တပ်သစ်စုကြပွင့်နုမညိုး၊ ပန်းမျိုးကုဋေစစ်ခြေ ခိုင်မြဲ၊ စစ်ပွဲအားမာန်တော်လှန်ရိုက်ကျူး ရဲရဲဖူး။ နွေးဦးစစ်ကွက်၊ မီးလျှံစက်လည်းတပ်ပျက် ဆုတ်ခွာ၊ ခယောင်းယာထဲငုဝါအောင်ပွဲ၊ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ။ ။ (မူရင်း – ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၆ ဒီဇင်ဘာ) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’ ရန်ပုံငွေပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ တွင် ပြုလုပ်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အသက် ၆၆ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် တေးသံရှင် မာမာအေး က ၎င်း၏ ဂီတအမွေအနှစ် မှတ်တမ်းအားလုံးကို တစုတစည်းတည်း စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာ့ ဂန္ထဝင်တေးဂီတ မပျောက်ပျက်အောင် ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် အနုပညာချစ်သူများနှင့်အတူ ‘မာမာအေး ဖောင်ဒေးရှင်း’ အမည်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတရပ် ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး ယင်းအဖွဲ့ရန်ပုံငွေအတွက် တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ‘သီချင်းဆိုရအောင်’ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ ရန်ပုံငွေပွဲကို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပင်လယ်အော်ဒေသ (ဘေးဧရိယာ) ရှိ ဒေးလီးစီးတီးမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် (စနေနေ့) ညနေ၌...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၆)နိုဝင်ဘာ မွေးနေ့ရှင် လူထုဒေါ်အမာထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ဟာ အမေ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ အမေ သက်ရှိထင်ရှားရှိဦးမယ်ဆိုရင် အမေ့ရဲ့ ၉၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို ဆင်နွှဲရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၇ဝ ပြည့် မွေးနေ့ကနေ စတင်ပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေကို စာပေနယ်၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က လူတွေသာမဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးနယ်ပယ်နဲ့ အရပ်သားတွေပါ သွားရောက် ဂါရဝပြုကြပါတယ်။ အခမ်းအနားနဲ့ လုပ်ခွင့်မရတဲ့ မွေးနေ့တွေမှာတောင် အမေ့ကို ချစ်ခင်လေးစားသူတွေက အမေ့အိမ်ကို သွားရောက်ပြီး ဂါရဝပြုကြပါတယ်။ အမေ လူထုဒေါ်အမာဟာ ကျောင်းသူဘဝကနေ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ မြန်မာပြည်အတွက် စာပေတာဝန်၊ သမိုင်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်လို့လည်း...
> ထောင်ဝင်စာအောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ ကောင်းကင်တနန်းကျောင်းသင်္ခမ်းမှာဒေါင်းအဆင်ဆန်းတွေနဲ့ပ၀ါအလံ ထူရမယ်။ တုတ်ရရ၊ ခဲရရလှံရရ၊ ဓားရရရသမျှနဲ့တရားမမျှတတဲ့နအဖကိုထထကြွကြွ‘ချဟ … ချဟ’ လို့ရှုတ်ချကြ ဖြုတ်ချရမယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ အတိတ်ပုံလွှာရာဇ၀င်မှာ‘အင်္ဂလိပ်အခက်၊ ဗမာ့အချက်’ တဲ့နိမိတ်ကြုံလာမကြာခင်ဟာနအဖအခက် ပြည်သူ့အချက် ပေါ့သပိတ်အစုံမှာသူပုန်ထရမယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ သံဃာတွေ၊ ကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေကိုငပေငတေစိတ်နဲ့မသေတသေ ပိတ်ပြီးအသေအကျေ နှိပ်တဲ့ကလေကချေ ပလိပ် သန်းရွှေအသံလွင့်သွားအောင်အထွေထွေ သပိတ်စခန်းတွေအမြန်ဖွင့်ထားရမယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ ဒဏ်ရာစိုစိုခန္ဓာကိုယ်မှာညိုပုပ်ရောင်ရမ်းပစေမငိုမလှုပ်မပြိုမဆုတ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတွေ မွေးရမယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ စစ်ကျွန်ခေတ်အလွန်မှာနွံနစ်နေတဲ့မြစ်ကိုလည်း သွန်ပစ်ရမယ်သွန်တဲ့အထဲလက်ကိုင်တုတ် စစ်သားနဲ့ ရဲထောင်ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပါတယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ အောင်မြေပါပဲကွယ်။ ကြံ့ဖွတ်တွေလန့်ကျွတ်နေအောင်အမြဲကြိမ်းမောင်းပြီးစွမ်းအားရှင်တွေလမ်းသလားရင်လေအမြဲ ဗိန်းမောင်းတီးတောထုတ်နေရမယ်။ မောင်ရေ …ထောင်တွေဟာ...
> မဆုံးတဲ့ အလွမ်း မိုးချိုသင်း နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ အခုတလော စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ။ ကြားရတဲ့သတင်းတွေကလဲ မကောင်းဘူး။ ၆၅ နှစ်တဲ့၊ အနှစ် ၂၀ တဲ့၊ ၄၅ နှစ်တဲ့။ အမိန့်ချတဲ့လူတွေတောင် အဲဒီလောက် အသက်မရှည်နိုင်ဘဲနဲ့ ပါးစပ်ထဲရှိတာ လျှောက်ပြော၊ လျှောက်လုပ်နေတာ ရှက်စရာကောင်းလှတယ်။ အဲဒီလောက်လဲ မကြောက်ကြပါနဲ့။ ဒီမနက်မှာတော့ ကိုဇာဂနာ့အမျိုးသမီး မလွင်မာနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် ၁၄ နှစ်တဲ့ ညီမရေ..တဲ့။ ပထမအကြိမ် ၄၅ နှစ် ချပြီးသား။ နောက်တိုး ၁၄နှစ်ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၅၉ နှစ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အကိုက သီချင်းလေးဆိုပြီး ထောင်ထဲ ပြန်ဝင်သွားတယ် တဲ့။ နောက်ထပ် တရားရုံးကို ထပ်လာစရာ မလိုတော့ဘူး။...
> ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြကြဆဲ၊၀န်ကြီးချုပ်အသစ်ကလည်း နှုတ်ထွက်မည်မဟုတ်ဟုဆိုဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၃ လ ကျော်ကြာ အစိုးရကို ဆန္ဒပြနေသူ အများအပြားက သုဝဏ္ဏဘူမိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးကို ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်များ ပျက်သွားပြီး ခရီးသည်များလည်း ဘန်ကောက်မြို့တွင်းသို့ ပြန်ကြရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် Anupong Paochinda (ညာဘက်) နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် Somchai Wongsawat (ဘယ်ဘက်)။ကြည်းတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ၀န်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ရန်၊ ဆန္ဒပြသူများ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ရပ်ဆိုင်းပြီး လေဆိပ်အတွင်းမှ ထွက်ခွာရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (ယခင်လက ထိုင်းဘုရင်၏အစ်မတော်ဈာပနအခမ်းအနား အစမ်းလေ့ကျင့်ပွဲတွင် ရိုက်ကူးထားသောပုံဖြစ်သည်။)(photos: AP, Reuters) No tags for this post. Related posts No...
> ဘုံဘေအကြမ်းဖက်မှု အဆုံးမသတ်သေးဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော် မွမ်ဘိုင်း (ဘုံဘေ)တွင် ယမန်နေ့ညက စတင်ခဲ့သည့် ဗုံးခွဲ၊ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အနည်းဆုံး သေဆုံးသူ ၁၀၁ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၂၈၇ ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအရာရှိတဦးကို ကိုးကားပြီး အေပီသတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ကျက်စားသည့် နေရာအချို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံသားအချို့ကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည်။ယမန်နေ့ည (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည) ၉နာရီခွဲအချိန်မှစတင်ပြီး အနည်းဆုံး ၁၀ နေရာတွင် တိုက်ခိုက်မှုများ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Deccan Mujahedeen ဟူသည့်အဖွဲ့က ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကို ၎င်းတို့ကစီစဉ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းဋ္ဌာနများသို့ အကြောင်းကြားထားသည်။ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားရာ မွမ်ဘိုင်းသည် ဘုံဘေဟု ထင်ရှားခဲ့သည့် မြို့တော်ဖြစ်သည်။ရဲ နှင့်...
> ဇာဂနာကို “လွတ်လပ်စွာ အနုပညာဖန်တီးခွင့်” ဆု ချီမြှင့် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂၊ ဓာတ်ပုံ – နာရီ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မှာ Art Venture အမည်ရတဲ့ အနုပညာရှင်များ စေတနာရှင်များအဖွဲ့က ရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုတဲ့ “လွတ်လပ်စွာ အနုပညာဖန်တီးခွင့်” ဆုများမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာကိုလည်း ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ အကျဉ်းကျ အနုပညာရှင်တဦးအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၀၈ တနှစ်ပတ်လုံးမှာ နိုင်ငံတကာက အနုပညာလွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက် အနုပညာရှင်များအသီးသီးရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ဖန်တီးမှုများကို ရွေးချယ် ဆုချီးမြှင့်ကြရန် ၀ိုင်းဝန်း အကြံပြုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံပေါင်း...
> အယ်လ်အေ အမျိုးသားနေ့ စာပေဟောပြောပွဲ စည်ကား မိုးမခ၊ ဓာတ်ပုံသတင်း (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ၊ ငယ်ဦးမွန်) နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသ၊ အယ်လ်အေမြို့ရောက် မြန်မာမိသားစုများနဲ့ အယ်လ်အေ သြဂနိုက်ဇာ၊ မန္တလေးဂေဇက်အဖွဲ့တို့ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့ အမျိုသားနေ့ စာပေဟောပြောပွဲကို စာရေးဆရာ မောင်သာရ၊ ကဗျာဆရာနဲ့ ဝေဖန်ရေးဆရာ မောင်စွမ်းရည် နဲ့ ကဗျာဆရာ အောင်ဝေးတို့ကို ဖိတ်ကြားပြီး စည်ကားသိုက်မြိုက် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရေးသူ ဖတ်သူ မေးဖြေကဏ္ဍကိုလည်း အချိန်ယူ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အခမ်းအနားစီစဉ်သူများက တင်ဆက်သူ ၂ ဦး အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုပြီး ပွဲကို တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာများကို လူငယ်များက...
> ဘိရုမာတင်တဲ့ ရွှေမင်းသားများ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ပရိသတ်များရွေးချယ်သည့်ကကွက်အတိုင်း ကပြအသုံးတော်ခံမည့် ဖျော်ဖြေပွဲအစီအစဉ်ကြီးတခုကို မိုးမခတွင် ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ “၂၀၁၀ အကြို စိန်မျောက်မျောက်တို့ ကတဲ့ပွဲ” ဟု အမည်ပေးထားသော မင်းသားနှစ်ယောက် နှစ်ကိုယ်တော် ကပြသည့် ပွဲအစီအစဉ်ကို ကာတွန်းများ၊ ဂိမ်းများ ဖန်တီးလေ့ရှိသူ ကာတွန်းဘိရုမာက ကမကထပြု စီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ http://moemaka.com/images/berumagame03.htm တွင် အခမဲ့ ခံစား ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ခေါင်းအက – ခေါင်းငြိမ်၊ ယိမ်း၊ ပြူတစ်၊ ရှန်တိန်လက်အက – လက်ငြိမ်၊ ဝှေ့ရမ်းက၊ စက်ရုပ်က၊ လက်လွှဲကခြေအက – ခြေငြိမ်၊ ဘေးယိမ်း၊ နောက်ထိုး၊ ခုန်ဆွ တို့မှာ ကပွဲတွင် မျက်နှာမသာမယာဖြစ်နေသူ မင်းသား၏...
> ကာတွန်း ဘီရုမာ – ၂၀၁၀ အကြို စိန်မျောက်မျောက်တို့ က တဲ့ပွဲ၊ သရုပ်ဆောင် သန်းရွှေနဲ့ မောင်အေး၊ ဒါရိုက်တာ – သင် ကိုယ်တိုင်ပါပဲ နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ၆၅ နှစ် မဟုတ်ဘူး မိုးမိုး (လူ့ဘောင်သစ်) နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်သန္ဓေတည်မွေးဖွားလာတဲ့ ‘မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး’ ဆိုတဲ့ အမြုတေ တခုဟာ ကျမ အသက်ရှင်ရပ်တည်နေသမျှ ဘယ်သောအခါမှ ဖောက်ပြန်သွားမယ့် သွေဖယ်သွားမယ့် အကြောင်းတရား မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ စွမ်းအားရှိသမျှ ကျမ လုပ်နိုင်သမျှ ‘ဒီမိုကရေစီရသည်အထိ’ စစ်အုပ်စုကို တော်လှန်နေမှာပါပဲ။ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းမှာ ချစ်တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမနဲ့ နိုင်ငံရေးရဲဘော်တွေဟာ ထောင်ဒဏ် အသီးသီး စီးပွားဒုက္ခအသီးသီးတွေကို ကြံကြံခံရင်း အသက်ပေးခဲ့သူတွေ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ လက်နက်အောက်မှာ သွေးမြေကျခဲ့တဲ့ ရဟန်း သံဃာ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေနဲ့ အသက်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့သူတွေဟာ ကျမ ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာ...
> ဘလော့ဂ်မှတဆင့် ယူကျုဆီသို့မိုင်မြစ်ကြီးနားနိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မ Queen Rania of Jordan အင်တာနက် သတင်းဆက်သွယ်မှုခေတ်ကြီးမှာ ဘလော့ဂ်(blog) ကို ၁၉၉၉ နှစ်လောက်မှာ စတင် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တနေ့တခြား တိုးများလာတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကနေတဆင့် ဒိုင်ယာရီ၊ ကဗျာ၊ ၀တ္ထု၊ ကာတွန်း၊ သတင်း၊ အတင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ နောက်ဆုံး ဘာပဲရေးချင်ရေးချင် လွယ်ကူစွာနဲ့ စာဖတ်သူတွေဆီ ကမ္ဘာအနှံ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရောက်စေနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ လူတချို့ကလည်း ကိုယ်ပြောချင်တာတွေကို ဘလော့ဂ်မှာ စာရေးပြီးဖော်ပြရတာထက် ၂ မိနစ် ၃မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့ ဗီဒီယိုအပိုင်းတိုကို ဖန်တီးလာပြီး အင်တာနက်ကနေ ဖြန့်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ နှစ်မှာ အဲဒီလို ဗီဒီယိုအပိုင်းတိုလေးတွေကို...
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ဇာဂနာသီချင်း၊ ဇာဂနာသတင်း (မိုးမခ၊ လဒကာ၊ ဒို့ခေတ်) သတင်းပဒေသာ၊ သီချင်းပဒေသာ ဒီနေ့စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းနဲ့ အမေရိကန်အင်ပါယာ (ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း) ဗမာပြည်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ် နှစ် ၂၀ ပြည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် စင်္ကာပူ-ထိုင်း-တရုတ်-မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအခြေအနေ ဦးဝင်းတင်အင်တာဗျူး နှင့် မွန်းအောင်သီချင်း ၉၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ရှင် လူထုဒေါ်အမာ ဂုဏ်ပြုခြင်း (တင်မိုး၊ ခင်နှင်းယု၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို၊ ကြွေလွင့်ပြီး ဓူဝံကြယ်ကြီးများ) စီစဉ်သူများ – ဦးပန်တျာ၊ နန်းဖောစေးဝါး လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး အခမဲ့ ကြော်ငြာနိုင်ပြီ ဆက်သွယ်ရန် Email – upantra@optusnet.com.au No tags for...
> စွယ်စုံရအနုပညာရှင် ဇာဂနာ၏ သမီး ငယ်ဦးမွန်။ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့၊ ဟောလိဝုဒ်လမ်း (Hollywood boulevard)ပေါ်ရှိ ဓာတ်ပုံဆိုင်တခုတွင် ရိုက်ကူးထားသောပုံဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းတွင် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနယ်ပယ်မှ ထင်ရှားသူတို့၏အမည်များကို ရွေရောင်ကြယ်ပွင့်များပေါ်တွင် ရေးထွင်းဂုဏ်ပြုထားသည်။ နာမည် အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ကျနော့်သားက မေးတယ်။ ‘ကြယ်တွေမှာနာမည်ရှိသလားဖေဖေ’ တဲ့။ မြစ်ကမ်းနဖူးမှာထိုင်တဲ့ညသားကကောင်းကင်ကိုငုံ့ ကြည့်နေတယ်။ ကျနော်ကကြယ်တွေတလက်လက်ထရေစီးထဲငေးလို့ ။ အေး … မတော်တဲ့ကြယ်တွေမှာနာမည်မရှိဘူးတော်တဲ့ကြယ်တွေကျတော့… … … …… … … …။ အဲ့ဒီလို အဲ့ဒီလိုကြယ်တလုံးချင်းစီရဲ့ နာမည်ကျနော်ပြောပြ။ ဖေဖေ … ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာသားနာမည်နဲ့ ကြယ်လည်းရှိမှာပေါ့နော်။ ကျနော် သားကိုပြုံးကြည့်ရင်းခေါင်းညိတ်ပြတော့သားကပျော်သွားပြီးကျနော့် မျက်လုံးထဲမှာသူ့ နာမည်နဲ...
> နေဘုန်းလတ် သို့မဟုတ် ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် သန်းစိုးလှိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်ဆိုတဲ့ အင်တာနက် ဘလော့ဆိုက်ကို မကြာမကြာ ဝင်ကြည့်မိတယ်။ ဒါဟာ ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့ သော့ပိတ်ထားတဲ့ အိမ်ခန်းကို အိမ်ရှင်ဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲ ဆိုတာကို သိချင်တဲ့သဘောနဲ့ မကြာမကြာ အိမ်ရှေ့နား မယောင်မလည် လာကြည့်မိတာနဲ့ သဏ္ဍန်တူနေပါတယ်။ အိမ်ရှင်ပြန်လာတာတော့ မတွေ့ရဘဲ အိမ်တံခါးဝမှာ အိမ်အပြင်ဘက်မှာ သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ဂုဏ်ပြုကြတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေတွေက စာရေးပြီး ထားခဲ့တာတွေပဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတော့ အိမ်ရှင်ပြန်မလာနိုင်သေးတဲ့အပြင် အိမ်ရှင်ကို ရက်စက်တဲ့ စစ်အစိုးရက အနှစ်နှစ်ဆယ် ခရီးထွက် ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုနေမျိုးကျော် (ဘလော့နာမည် ကိုနေဘုန်းလတ်) သူ့အိမ်လေးကို သူပြန်လာကြည့်ခွင့်...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၄)သံဃာတော်များနေ့မာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ အရင်တပတ်က တန်ဆောင်မုန်းလကို ရှေးက တန်ဆောင်မှုန်းလလို့ ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း မီးထွန်းပွဲ ဖြစ်လာရတာက အဖသတ်သား ‘အဇာတသတ်’မင်းကြောင့်လို့ ပြောပြမယ် လို့ စတုန်းအချိန်မှာ ဗြုန်းဆို အချိန်က ကုန်သွားတာနဲ့ ခုမှ ဆက်ပြောရပါတယ်ရှင်။ နှလုံးလှတဲ့ ဘုရင်ကြီး ဗိမ္မသာရနဲ့ မိဖုရားကြီးဝေဒေဟီတို့ရဲ့ မိဘချစ်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ သားရင်း ‘အဇာတသတ်’ရဲ့ အာဏာရူးခြင်း၊ ရက်စက်ခြင်းဆိုတာတွေကို သားသမီးနဲ့ မိဘတို့အကြား အဆိုးတရားတွေ ပေါ်လာဖြစ်လာကြတဲ့အခါ ဇာတ်နာနာ ခံစားနားလည်စေဖို့ ဒီသားအဖရဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့...
> အမျိုးသားနေ့ (တံဆိပ်ခေါင်းများ) ဦးအုန်းကျော် နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ “၁၉၂ဝ မှာ ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြ၊ သပိတ်မှောက်လို့ ‘အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့’ စပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ ကျနော် မှတ်ထားမိတယ်။ အခုဆိုရင် ၈၈ နှစ်တောင် ရှိပြီပေါ့နော် ဦးလေး” “အေး … ငါ့တူပြောတာ မှန်သကွ။ ဒါနဲ့ ငါ့တူကို သတိထားမိဖို့ ပြောရဦးမယ်။ အမျိုးသားနေ့ကို အမှတ်အသားပြုမယ်ဆိုရင် ဗမာလို ဗမာပြက္ခဒိန်နဲ့ မှတ်ထားရတယ်ကွ။ အင်္ဂလိပ်လို မမှတ်ထားရဘူး။ ရက်က တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ဝ ရက်၊ နှစ်က ၁၂၈၂ ခုနှစ်။ အဲဒီလို ဗမာဆန်ဆန် ဗမာ့ပြက္ခဒိန်နဲ့ မှတ်ထားမှလည်း ‘အမျိုးသားနေ့’ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် အနှစ်သာရ...
> လုံထိန်းများက ဘောလုံးပွဲပရိသတ်ကို သေနတ်နဲ့ချိန် မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှား ဗိုလ်လုပွဲအပြီး အနိုင်ရ မြန်မာအသင်းအား ဂုဏ်ပြုသည့် ပွဲကြည့်ပရိသတ်များ ကွင်းထဲဝင်ရောက်ခဲ့ကြရာတွင် လုံထိန်းများက သေနတ်ဖြင့်ချိန်ကာ အဆိုပါပရိသတ်ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြသည် ဟု သိရှိရသည်။ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို မြန်မာအသင်းက ၂ဂိုး၁ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရသွားသဖြင့် ပြိုင်ပွဲအပြီး ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် ၅၀ မှ ၇၀ ၀န်းကျင်ခန့် ဘောလုံးကွင်းထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာအလံကို လွှင့်မြှောက်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် အနိုင်ရသည့် အသင်းများကို ဆုပေးမည့် အားကစား ၀န်ကြီး ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကွင်းထဲရောက်နေသည့် အောင်ပွဲခံခဲ့ကြသည့် ပရိသတ်ကို လုံထိန်းများက...
> စစ်အာဏာရှင်တို့က ပြည်သူ့အာဏာကို စိန်ခေါ်ပြီ မောင်ရစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ စစ်အာဏာရှင်တို့က ၎င်းတို့ ပိပြားအောင်ဖိနှိပ်ထားသော ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို စိန်ခေါ်ပြီးရင်း စိန်ခေါ်လျက်ရှိသည်။ သံဃာတော်တို့ကို သတ်ဖြတ်ပြီး၊ အပြစ်မဲ့သော တောင်သူလယ်သမားနှင့် ရေလုပ်ငန်းလုပ်သားပြည်သူတို့ကို နာဂစ်မုန်တိုင်းတည်းဟူသော သေတွင်းသို့ တွန်းပို့ပြီးနောက်၊ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံအင်အားစုတို့ကို သာမန်လူတဦးအသက်နှင့် မဆန့်သော နှစ် ၆၀ ကျော် ထောင်ဒဏ်များ၊ နှစ် ၄၀ ကျော် ထောင်ဒဏ်များကို ချမှတ်လိုက်ခြင်းမှာ လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီး ဒူးတုတ်ထိုင်နေရသော မိဘပြည်သူတို့ ရင်ဝကို စစ်ဖိနပ်ဖြင့် ကန်လိုက်သည့် သဘောပင် ဖြစ်တော့သည်။ နိုင်ငံတကာ၏ ဖိအားကို၎င်း၊ လူ့အခွင့်အရေးလေးစားသူ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို၎င်း ဖုတ်လေသည့် ငပိ ရှိသည့်ဟုပင် မထင်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် သက်သေပြလိုက်ခြင်းပင်...
> အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ မင်္ဂလာခွန်းဆက် မင်းသုဝဏ် နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ အိုးဝေတဲ့ညံညံ။ ရွှေဒေါင်းပျို တောင်ညိုဦးမှာ ကျူးရင့်အောင်သံ။ အောင်ပွဲရယ်ခံ နိုင်ငံတဲ့သာရေး။ မင်္ဂလာ စည်တော်ရွှမ်းချိန်မို့ ခွန်းချိုဆက်တေး။ ။ မင်းသုဝဏ် ကြီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်း နိုဝင်ဘာ၊ ၁၉၃၅။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> တင်မိုးရဲ့လွယ်အိတ်မောင်စွမ်းရည်နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သူထိုင်နေဆဲ၊ ဗြုန်းကနဲဆိုလဲကျတုန်းက၊ ပခုံးမှာချိတ်သူ့လွယ်အိတ်လည်း၊ ပခုံးထိပ်ကပြုတ်ကျမြေမှာ ခွေခွေလေး။ လွယ်အိတ်ထဲမှာပါမြဲပါတဲ့ပ၀ါ၊ စီးကရက်၊ လက်သည်းညှပ်နဲ့ချွဲကျပ်ပျောက်ဆေး၊ သော့တွဲလေးနဲ့ဆေးသကြားထုပ်၊ မီးခြစ်ထုပ်နဲ့စာအုပ်ကလေး၊ ဖောင်တိန်လေးနဲ့တွေးစ ရေးစ ကဗျာများ။ ခုတော့သူ့လွယ်အိတ်လည်းလွယ်အိတ်သခင်၊ ထားစဉ်ထားရာနံရံမှာပဲ၊ ချိတ်မြဲချိတ်လျက်ဆေးလိပ်လက်ကျန်၊ ကျန်မြဲကျန်လျက်ကဗျာလက်ကျန်၊ ကျန်မြဲကျန်လျက်နံရံထက်မှာ၊ ဟက်လက်ဟာလာမျှော်ငေးရှာလျက်။ ။ (ကဗျာဆရာတင်မိုး၏ ၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ)မောင်စွမ်းရည်၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ ၂၂နံနက်လေးနာရီLA No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 853 of 909«1...851852853854855...909»
ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) ● လူအုပ်ကြီး https://t.co/cXG1u0tt2C https://t.co/q3JbtFFs2F about 59 minutes ago ReplyRetweetFavorite